फोटो फिचर – Janaubhar
गाउँ,टोलमा पुगेर कक्षा संन्चालन
दाङ, विद्यालयका कक्षाहरु फरक–फरक रुपमा सञ्चालन गरिरहेको समयमा दाङको एक सामुदायिक विद्यालयले भने समुदायमै पुगेर विद्यालय कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । लकडाउनका कारण पूर्णरुपमा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको अवस्थामा श्री बाल प्रावि कुमालगाउँ तुलसीपुर–१ पवननगरले समुदायमै पुगेर विद्यार्थी पढाउन शुरु गरेको हो । घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त विद्यालयले करिब दुई महिनादेखि निरन्तर रुपमा विभिन्
संग्राहलयमा संग्रहित थारु संस्कृति
थारु समुदायको लोपउन्मुख कला,संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न पश्चिम दाङको चखौरामा वृहत थारु संग्राहलय बनाइएको छ । थारु अगुवा तथा प्रदेश ५ प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरीको संरक्षकत्वमा र योजनाका आधारमा चखौरामा बृह्त था? संग्रालय निर्माण गरिएको हो । उतm संग्राहलयमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्मका थारु समुदायका कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरेर राखिएको संग्राहलयका संरक्षक तथा प्रदेश
Oct252019 by जनउभार संवाददाताNo Comments
फष्टाउदै क्षितिजको फूल व्यवसाय
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, कार्तिक ८, २०७६ |
घोराही, घोराही उपमहानगरपालिका १३ डुम्मरगाउँको झण्डै डेढ बिघा जमिन । त्यही जमिनमा तिहारको छेकोमा ढकमक्क फुलेका छन सयपत्री फूलहरु । सयपत्री फूलसँग खेलिरहेका भेटिन्छन, क्षितिज मगर । रोल्पाको जेल्बाङमा जन्मिएका उनी हाल दाङको घोराही १४ मा बसेर केही बर्ष यतादेखि फूल व्यवसाय गदै आएकाछन् । माओवादी जनयुद्धमा होमिएका उनी धेरै साहित्यिक रचना गदै क्षितिजको नामले चिनिदै आइरहेकाछन् । राजनीति हुँदै फूलको व्
मनै लोभ्याउने संसारका आर्कषक पुल
कुनै पनि सहरलाई सुन्दर बनाउन पुलहरुको निकै ठूलो भुमिका रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि आकर्षक रुपमा बनाइएका पुलले सहरलाई स्वर्ग जस्तै बनाइदिन्छन् । त्यस्ता आश्चर्य लाग्दा पुलहरु हेर्दा सबैलाई आनन्द र खुसी तुल्याउँछ । हेरौ संसारमा रहेका ती आर्कषक पुलहरु ः १. यो टेम्स नदी माथि बन्दै गरेको पुल हो, जसलाई गार्डेन ब्रीज वा बगैंचा सहितको पुल पनि भनिन्छ । थोमस हेथरविकले टाइटानिकको एउटा दृश्यबाट प्रभावित भ
जनयुद्धकी कलाकार बनिन् सफल उद्यमी
रोल्पा । पहिला जलजला सांस्कृतिक परिवारले प्रदर्शन गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न भूमिका थापा साथीहरुसँग घरबाट भागेर सदरमुकाम जान्थिन् । २०५२ फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा जनयुद्धको घोषणा भएपछि सांस्कृतिक परिवारका कलाकार पनि भूमिगत भए । तत्कालीन सरकारले खुला रुपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन प्रतिबन्ध लगायो । गीत सङ्गीत प्रति रुची भएकी उनी कलाकार बनेरै छाड्ने निश्चयका साथ १५ बर्षको उमेर नप
दाङको मनोरम सुन्दरतामा रमाऔं
दाङ, अहिले आन्तरिक पर्यटकको रुपमा विदाको समयमा रमनिय ठाउँहरु घुम्ने प्रचलन बढेको छ । देशमा विभिन्न प्राकृतिक रमनिय ठाउँहरुको अवलोकन भ्रमण गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा दाङ पनि घुम्नपर्ने स्थानको रुपमा चिनिदै जान थालेको छ । प्रकृतिको धनी दाङ उर्वर फाँट अनि हरिया पहाडहरुले घेरिएको मनमोहक उपत्यकाको दृष्यावलोकनले मन लोभ्याउने गर्छ । आजभोलि खेतका आलीमा पहेलपुर झुलेका धानका वाला र बारीमा पहेलपु